Tobanka taangi dagaal ee ugu khatarsan adduunka (sawirro) – Page 6 – Radio Daljir
(5) Armata (Russia – Ruushka)
Taangiga Armata waa noocii ugu danbeeyey ee taangiyada Ruushka, waana mid hawgalaya sannadka 2020-2021.
Weli taangigaan macluumaad badan lagama hayo, laakiin waxaa la qiyaasayaa in uu yahay taangi huwan qalfoof kan adduunka ugu adag oo ka samaysan aaladihii adduunka ugu danbeeyey. Waa taangi iska difaaci kara dhammaan hub kasta oo lala beegsado.
Taangiga waxaa saaran kuruu ka kooban 3 qof oo saddexduba is dhinac fadhiyaan. Xataa haddii qayb taangiga burbur soo gaaro weli kuruugu waa xafidanyahay, waana sii wadi karaan taangiga.
Dhuunta taangigu waa mid kaligeed is jihaynaysa, kuna hubaysan qoriga smoothbore ee 125 mm. Waa taangi ridi kara xabadda lidka taangiga si ka madaxbannaan kuruuga.
Taangiga waxaa saaran matoor diisal oo ah 1200 hp.
Taangigaan markii uu suuqa soo galay waxa uu khlakhal gashay difaaca reer Galbeedka, siiba Jarmalka iyo Ingiriiska, oo isla markiiba bilaabay in ay casriyeeyaan taangiyadooda, si ay uga hortagaan khataraha ka imaan kara taangigaan.